I-25 ephezulu yeGolfers ye-All-Time (Usetyenzise amadoda)
Beka iGalati yabadlali abakhulu kunabo bonke
I-Top 25 Abagadi beGoli be-All-Time
Ngubani na owona golfe obalaseleyo kwimbali yomdlalo? Nantsi inqanaba lethu leGrafers eziphezulu eziphezulu ezingama-25 zexesha lonke. Uyazi into abayithethayo ngeengcamango: Wonke umntu unalo. Zizo zethu.
1. I-Tiger Woods
I-Tiger Woods iyona golfer enkulu kunazo zonke. Akunjalo, akazange aqokelele irekhodi likaJack Nicklaus eninzi kunqoba, kwaye ubukeka ngathi akayi kuyenza. U-Nicklaus wayinqobile ama-18, ama-Woods anama-14. Abantu abaninzi bakholelwa ukuba i-Woods ayikwazi ukubizwa ngokuba yona mkhulu kunako okanye ngaphandle kokuba ibetha irekhodi likaJack.
Andiyena omnye kubo, ngokusobala, kuba kuluhlu lwegalufu asikwazi ukujonga inombolo enye kuphela. Ukuba inkulu kunayo yonke inqunywe ngokukhawuleza ngeenombolo zezikhundla eziphumeleleyo, ngoko kutheni uzikhathaze nge Top 10 okanye Top 25 okanye Top 100 izintlu? Vala uluhlu lwabagadi begalufa ngokulandelelana kweendwendwe kunye nokuyibiza ngomhla. Kodwa akukho mntu wenzayo, kuba ezinye izinto zichaphazelekayo.
Kufuneka sihlolisise ngokupheleleyo iirekhodi, zombini iimpumelelo zegalufa, iikhompyutheni zabo ezifanelekileyo, ezona zihamba phambili. Kwaye iinkuni zibetha uNicklaus kwezinye iibalo. I-Woods inqobile izihloko ezininzi zeemali, ukubeka amanqaku amaninzi, izibhengezo ezingaphezulu kweMdlali weNyaka - ngaphezu kweNicklaus, ngaphezu kwanoma ngubani omnye. I-Woods inamanani amaninzi angama-PGA Tour kuneNicklaus. Izinkuni zinamaxesha amaninzi ngamahlanu okanye ngaphezulu kunamnye umntu, kwaye amaxesha akhe asemgangathweni angcono kunamaxesha amahle kakhulu kaNicklaus. Uninzi lwamaxesha aphezulu aseNicklaus - uPalmer, Watson, Trevino, Miller - athethe ukuba i-Woods 'ibhetele ibhetele kuneyona Nicklaus engcono.
(Nangona abanye babo, njengoko bekhulile kunye neentlanzi, babuyela kwakhona.) Nangona uJack uye wavuma le nto.
( UTham Watson uxele ibali lokubukela umdlalo wegalufa kwiTV kwiNdlu kaNicklaus aze abone i-Woods yenza into ephawulekayo. UWatson wathi kuNicklaus, "Yiba neyona nto ibhetele?" "Ewe," uNicklaus waphendula, kuWatson, "nguye owona mhle.")
Amanani abaluleke kakhulu ekusetyenzisweni kwegalufu, ngokucacileyo, kodwa kufuneka ajongwe kumxholo. Ukuphakama kweempumelelo zeThuthi - zombini ngokubhekiselele kumanani omvuzo ngamnye ngonyaka, ngendlela alawula ngayo i-tournaments, ngendlela alawula ngayo iindwendwe ezizimeleyo, kwixesha leenkwenkwezi zeenkwenkwezi ebeziphethe, kunye nezitifiketi ezinkulu ezithinjwa kwiimpumelelo kunye neengcambu - makenze yena, ngombono wam (kwaye uyazi ukuba bathetha ngani ngeengcamango), kungekhona nje into engcono kakhulu, kodwa kulula iNombolo 1 kuleluhlu. Kungenxa yokuba i-Woods ayinayo kuphela inamba enkulu ephosa, kodwa yafezekisa ezininzi izinto ezinzulu kwixesha elidlulileyo, elinolwazi kakhulu kwimbali yegalufa.
2. UJack Nicklaus
U-Nicklaus akazange alawulwe ngabahlali bakhe njengokuba iTiger ilawula, kodwa yintoni ebonakalayo malunga ne-Golden Bear yindlela efana ngayo enkulu. Wonke umntu uyazi ukuthi uNicklaus unqobile amanqaku amaninzi (18), kodwa naye wagqiba ngowesi-19 kwezinye iimbali. Ububanzi kunye nobunzulu beemidlalo zomdlalo kaNicklaus, kwaye ngokuqinisekileyo (ixesha elide) lidlulele lezo ziThuthi, kodwa ixabiso likaNicklaus "lilingana neNkuni".
3. uBen Hogan
Nangona bekunzima iminyaka ngaphambi kokugqithisa, kwaye nangona umsebenzi wakhe uphazamisekile kwaye wanciphisa ingozi yemoto eyingozi, uBen Hogan wayesoloko ephethe ukuphumelela kobunzima obuntshatsheli kunye nemisebenzi eyi-62 yokuphumelela.
Eyona nto yayingcono, washiya abantu bakhe ngexesha eluthulini. Ngaphandle kokuba umsebenzi wakhe uphelelwe yimoto, uHogan kungenzeka ukuba yiNombolo 1 kuleluhlu. Kodwa yinto-ukuba.
Ubungakanani uBobby Jones ? Akuyona umbuzo olula ukuphendula. Ngomhla wakhe, iimbombo ezine zazingqineli ezivulekileyo ezizivulekileyo - iiBritish kunye ne-US - kunye neengqungquthela ezimbini ze-Amateur - kwakhona, iBritish kunye ne-US Jones bawaphumelela ezi zihlandlo ezi-13 kwaye bawina zonke ezine - i-Grand Slam - 1930. Emva koko wayethatha umhlala-phantsi eneminyaka engama-28. Waqhubeka efumana iMasters. Oku kuqinisekile: Unokuthi uJohn wayeyena mhle kunabo bonke, njengoko unako kwi-Top 4 kuloluhlu. Kodwa kwiluhlu lwethu ayi-No. 4, ngokuyinxalenye ngenxa yokuba ixesha lakhe - i-1920s - linomlinganiselo ongaphantsi kakhulu xa kuthelekiswa neeras later.
U-Arnold Palmer uzuze amaxesha angama-62 kwi- PGA Tour , kubandakanywa amanqindi amanqaku asixhenxe.
Uncedise i-golf egxininiswayo njengemidlalo kunye nokuzonwabisa kunye nendlela yakhe yokudlala, kunye nokunceda ukuvuselela i- British Open kuphela ngokubonisa ukudlala loo mqhudelwano. Eyona nto yayingcono, wayengomnye wezona zinto zihamba phambili kwixesha lonke. Kukho ukukhutshwa kweNombolo 4 ukuya kuNombolo 5 - i-Top 4 iklasi ngokwabo. Kodwa u-Arnie uphakamisa isantya esilandelayo se-golf greats.
Okwangoku - de kube okanye ngaphandle kokuba uMtshitshi uyadlula - uSams Snead uphethe irekhodi ye- career ye-PGA Tour ye-PGA ye- 82. I-Snead yaqala ukuphumelela ngowe-1936, kwaye yagqitywa ngo-1965. Xa wayeneminyaka engama-62 ubudala wayigqiba yesithathu kwi- PGA Championship ; xa wayeneminyaka engama-67, wadubula kuma-67-66 kwimigangatho yokugqibela ye- Quad Cities Open .
7. UTham Watson
U-Watson ngokuqinisekileyo unxibelelwano olugqithiseleyo kunabo bonke, ngeentlawulo ezihlanu kwi-Open Open. Kodwa wayemkhulu kakhulu, ecaleni kweNicklaus ngasekupheleni kweminyaka yee-1970 kwaye ephumelela ukulwa ne-Bear, eyaziwa kakhulu kwi- 1977 eBritish Open . UWatson wayenamathoko angama-39 e-PGA Tour, kubandakanywa amajors ayisibhozo.
UGary Player uzuze "ngamaxesha angama-24" kwi-PGA Tour, kodwa leyo yayiyingxenye kuba wayehamba ngehlabathi, edlala kakhulu kwi-PGA Tour njengalo. Wayeyena yokuqala yegolfu inqabileyo yegolfu. Kwaye ezithoba kwesoo-24 zazingama-majors. (Umdlali wayenamarekhodi angama-3-10 ahluphekileyo kwi-PGA Tour playoffs, nangona kunjalo.) Wadla i-tournaments ezingaphezu kwe-100 kwezinye iindawo zehlabathi.
Amanani omsebenzi aphezulu kakhulu - ama-52 amaninzi, kubandakanywa amaqhosha amahlanu. U-Byron Nelson wayengowokuqala phakathi kwakhe, uHogan noSnead ukuze bazuze ubukhulu, kodwa nabo baqala ukuhamba kuloo ndawo, abaselula.
Kodwa kwakukho loo ngqambileyo ye-1945 yexesha- iimpumelelo ezi-18, eziquka ezilandelelanayo ezi-11-ezingayi kuze zifane.
10. UPhil Mickelson
Akakaze abe neyexesha elilodwa le-monster, kodwa uPhil Mickelson uhlala egcina iinqununu. Emva kokuwina i- British Open Open ka - 2013 , wayenokuphumelela kwiintlanzi ezine, ezine zintlanu kwiimpumelelo, kunye nama-42 amaninzi kwi-PGA Tour.
Kwaye ngaba ngabadlali abalandelayo aba-15 kwindawo yethu, bajikeleza i-Top 25:
11. UBilly Casper
12. UWalter Hagen
14. UHarry Vardon
15. I- Gene Sarazen
17. UPeter Thomson
23. URaymond Floyd
25. UGreg Norman
Kutheni uChi Chi Rodriguez Ngomnye wabadlali beGolane abaLwazi abaDumileyo
Indlela uMichelle Wie ayenze ngayo KwiiNgqungquthela zee-PGA zoTyelelo kunye nabanye abaKhenketho boMadoda
Umtshato weTiger Woods: Umhla, indawo, iindleko kunye nabavakashi
Igalari: Abantwana bakaTiger Wood, uSam noCharlie
7 Ubungqina bovuko
'IKarimesi yeKarimesi' Isigama soLwimi lokuFunda
Iikontraki zeeNtengo eziHlomelo
IMedal, Meddle, Metal kunye neMettle
Sifanele Sibambe Intsapho Yethu Ukuhlangana?
Ukwazi ixesha lokusebenzisa iifomu eziqhelekileyo ze 'Wena'
Isingeniso esifutshane kwiBhagavad Gita
I-Best Actor Actor Winners-1960s
Ukuqonda imeko ngesiNgesi ngegrama
Yintoni Umdlalo wesikolo?